Somaliland: Dr. Xaglo-toosiye Oo Iska Barraxay Tuhunno Lagu Yasay Dadnimadiisa Iyo Mowqifkiisa Siyaasiga Ah Ee Somaliland - Wargane News
Home Somali News Somaliland: Dr. Xaglo-toosiye Oo Iska Barraxay Tuhunno Lagu Yasay Dadnimadiisa Iyo Mowqifkiisa...
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye), ayaa Shalay Xilkii Wasaaraddaasi ku wareejiyey Wasiirka cusub ee uu Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi u soo Magacaabay.
Dr. Saleebaan Ciise Axmed oo khudbad ka jeediyey Munaasibaddii uu xilka ku wareejiyey Shalay, ayaa ka hadlay Warar Maalmihii u dambeeyay Warbaahinta qaarkood baahinayeen, kuwaasi ku saabsanaa in Boolisku uu magaalada Burco ku qabtay Laba Gaadhi oo ay sheegeen in Wasiir Xaglo-toosiyey la baxsanayey, waxaanu sheegay in Arrintaasi tahay mid layaabkeeda leh, laakiin aanay Saleebaan ahaan ka suurtoobayn waxaas iyo wax la mid ah, maaddaama buu yidhi uu yahay Muwaadin jooga Dalkiisii, hantidiisu taallo Hargeysa, Xaaskiisa iyo Carruurtiisuna Hargeysa ku nool yihiin.
Dr. Saleebaan Ciise Axmed (Xaglo-toosiye) oo Arrimahaa ka hadlayaana wuxuu yidhi “Anigu Hantiile ayaan ahay, Hantidaydu Hargeysa ayay taallaa, Guryahaygaa ka dhisan, Ubadkaygaa jooga, xaaskaygaa deggan, Anigaa jooga, waan u dhashay, waan ku koray (Somaliland). Waxaan aad uga naxay oo aan la yaabay Ninka yidhi wuu baxsaday anigoon baxsanayn, baabuur aan Anigu mid leeyahay, midna Wasaaraddu leedahay (Wasaaradda Caafimaadka) oo Anigoo Wasiir ah amarkayga ku baxay ayaa inta Burco lagu qabtay la yidhi way baxsanayeen, ima qabato runtii.”
Dr. Xaglo-toosiye wuxuu sheegay in aanay wax cusub ahayn in Masuuliyiinta reer Somaliland qaarkood lagu tuhmo inay Hanti ummadeed la baxsanayaan, “Maaha wax cusub (eedda la ii soo jeediyey), Waayo? Alle ha u naxariistee Maxamed Aadan Qaybe oo Guddoomiyaha Baarlamaanka ah ayaa Gaadhi uu lahaa lagu qabtay Qori-lugud (Wakhti hore), waxa la yidhi Xadka ayuu ka baxayey oo waa lala baxsanayey, Qaybi wuxuu yidhi ‘Xadka Somaliland ma Qori-lugud baa’, aniguna waxaan Maanta leeyahay Xadka Somaliland ma Burcaa. U malayn maayo in Madaxweyne Muuse Biixi arrinkaa wax ka ogyahay.” ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray oo uu ka hadlay sida uu u arko Xukuumadda uu soo dhisay Madaxweyne Biixi taasi oo aanu isugu ku jirin, waxaanu xusay inaanu ka xumayn “Kama xumi, kamana Xumaan doono Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo Xukuumadda uu dhisay, tagista uu Aniga iga tagay (ee uu xil ii Magacaabi waayay), Waayo? 70 Wasiir baanu ahayn oo Malaha waxa naga soo noqday (oo xilal imika loo dhiibay) Saddex ama Afar Wasiir (oo Xukuumaddii hore ah), markaa maaha wax aniga Ii gaar ah, haddii Wasiirradii aan ka tirsanaa soo wada noqon laayeen oo aniga keliya la iga tagi lahaa ayaan colaad qaadi lahaa.”
Wasiirkii hore ee Wasaaradda Caafimaadka Somaliland wuxuu ka hadlay waxa uu u malaynayo in Madaxweyne Biixi uu daadiyo Wasiirradii Xukuumaddii Madaxweyne Axmed-Siilaanyo “Waxaan u malaynayaa Qoladayadii Xilka wareejisay ayaa Dadku yar sanifoo Madaxweynuhu wuxuu is yidhi ‘Dalkaa isbeddel u baahan’ oo Wasiirradii hore ayuun baa dhinac loo yar leexiyey.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey inaanu ahayn Qof looga baqo Somaliland “Aniga waad i garanaysaan oo Somaliland tacab badan baa igaga jira, han-siyaasadeed baan leeyahay, waxaan isku sharraxay Madaxweyne ku-xigeen, welina hankaasi wuu igu jiraa inaan Madaxweyne iyo Madaxweyne ku-xigeenba ka noqdo Somaliland, waanan naawilayaa Madaxweynaha iyo Madaxweyne ku-xigeenba (inaan Somaliland ka noqdo)..”ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray “Waxaan idiin sheegayaa in aanaan Anigu halkan ka tagayn, in aanan Ajanabi ku ahayn, Ajanigaa la yidhaahdaa wuu baxsanayaa. Waxaan leeyahay inta aaminsan in Somaliland beeli leedahay aad baan u necebahay ee Nacdali ha ku dhacdo, waxaan iyagana necebahay kuwa annaga ah ee xaggaa ka soo jeeda ee aaminsan in Beeli leedahay meeshan (Somaliland), waar meeshan waynu wada leenahay.”
Dr. Xaglo-toosiye oo ka hadlaya Baabuurta loo tuhmay inuu la baxsanayey ayaa sheegay “Waxyaabaha qosolka leh ee la yidhi waxa ka mid ah ‘in la yidhi Baabuurta Buuhoodle ayuu geynayey oo Qoryo ayuu saarayey, waxaan idiin sheegayaa haddaan dagaalamayo Maslaha (Hargeysa) ayaan degganahay Maslaha ayaan ka bilaabayaa (Dagaalka).” Ayuu yidhi, waxaanu intaa sii raaciyey “Waxaan aad iyo aad ugu Mahad-celinayaa Madaxweynihii hore Axmed Maxamed Siilaanyo oo aad iigala shaqeeyay nabadda deegaannada aan ka soo jeed oo aad u qasnaa. Maalintii aanu heshiiska galnay aniga iyo Madaxweynihii hore ee Somaliland wixii ka dambeeyay deegaannadaa Xabadi kama dhicin oo waa Nabad. Meel aan Maamulka Somaliland gaadhin oo deegaannada bariga ah Buuhoodle ayaa jirta, Buuhoodle-na wax yar baa u dhiman, markaa Madaxweynaha cusub waxaan ugu baaqayaa inuu Nabadda halkaa ka sii wado, Kasbashada Buuhoodle-na anigaa ku dedaalaya.”